जाडोमा प्या’जको पात खानुको ५ फाइदा – eSidhakura
मुख्य पृष्ठरोचकजाडोमा प्या’जको पात खानुको ५ फाइदा
जाडोमा प्या’जको पात खानुको ५ फाइदा
५ दिन अघि प्रकाशित
काठमाडौं, क्रमस जाडो बढ्दैछ । जाडोसँग कसरी जु’ध्ने ? न्या’नो कपडा, आ’गो वा हि’टर मात्र काफी छैन । कतिपय खानपानको माध्यामबाट पनि चिसो भ’गाउन सकिन्छ ।चिसोबाट जो’गिनको लागि खाइने खा’द्यपदार्थहरुमा तातो सुप र झोलयुक्त तरकारीहरु हाम्रो रो’जाईमा पर्छन् । तातो सुपहरुको से’वन गरेर हामीले आफ्नो शरीरलाई न्यानो राख्छौं ।अझै जाडो महिनामा सुप, तरकारी वा मासुमा प्याजको हरियो पत्ता मिसाउँदा त झनै गज्जब हुन्छ । तरकारी, सुप, मासु लगायतका खानेकुरामा प्याजको पत्ता राखेर बनाउँदा यसले खानेकुराको स्वा’द ति’ख्खर मात्रै बनाउँदैन यसमा भरपुर मात्रामा पाइने पौ’ष्टिक तत्वले हाम्रो शरीरलाई फा’इदा पनि गर्छ ।
यसमा क्या’लोरी कम हुन्छ र सल्फरको मात्रा धेरै हुन्छ जुन स्वास्थ्यको लागि धेरै ला’भदायक छ । यसमा पाइने पे’क्टिन नामक प’दार्थ क्या’न्सर जस्ता भ’यानक रो’गबाट ब’चाउन उपोगी हुन्छ । हरियो प्याजको प्रयोग चीनमा प्राचिन समयमा औ’षधिहरुमा गरिँदै आएको पाइन्छ । यसमा भिटामिन ए, भिटामिन सी, भिटामिन बी २, कपर, म्या’ग्नेसियम, पो’टासियम, म्या’ग्निज आदी भरपुर मात्रामा हुन्छ ।प्याजको पत्ताको से’वन आँखाको लागि धेरै ला’भदायक छ । यसले आँखाको ज्योती बढाउन सहयोग गर्छ ।ए’न्टी अ’क्सिडेन्टले भरपुर हरियो प्याजको पत्ताले डि’एनएमा क्ष’ति हुनबाट बचाउँछ ।
यस बाहेक यसमा पाइने भिटामिन सीले र’क्तचाप नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ । यसले को’लेस्टेरोल नियन्त्रण गरेर मु’टुको रो’गबाट बचाउँछ ।जुन मानिसलाई म’धुमेहको रो’ग छ उनीहरुको लागि प्याजको पत्ता से’वन गर्नु धेरै फा’इदाजनक हुन्छ । यसमा पर्याप्त मात्रामा स’ल्फर हुन्छ जसले इ’न्सुलिनको स्त’रलाई सन्तुलित बनाइराख्छ ।प्याजको पत्ताले शरीरमा क्या’न्सर से’ल ब’ढ्नबाट रो’क्छ । यसको से’वन गर्नाले तपाईंलाई क्या’न्सर हुने ख’तरा कम हुन्छ ।भिटामिन सी र के जस्ता त’त्वले भरपुर प्याजको पत्ताले ह’ड्डीहरुको क्रि’याशिलतालाई ब’ढाइराख्ने काम पनि गर्छ । यसले ह’ड्डीहरु म’जबुत बनिरहन्छ ।
ग्यास्ट्रिकले है’रान हुनुभएको छ, बिरेनुन हो अ’चुक औ’षधि
तपाईं अविवाहित वा एक्लो हुनुहुन्छ भने शरीरमा पर्नसक्छन् यस्ता अ’सर
‘कोरोना संक्रमण हुँदा स्वाद वा गन्ध थाहा नपाउने लक्षण देखिनु राम्रो’
घरको छानो फु’टाएर ख’सेको उ’ल्कापिण्ड झण्डै २१ करोडमा बिक्रि तर पाएनन पैसा !
कोरोना संक्रमण रोक्न टिमुर पनि उ’पयोगी
जीवनमा भु’लेर पनि अ’पुरो नराख्नुस् यी ५ काम
के तपाईको खुट्टाको दोस्रो औंला अरु औंलाभन्दा ठूलो छ ? जान्नुस के संकेत गर्छ ?
८० करोड रुपैयाँ मूल्यका आइफोन बोकेको ट्रक रोकेर लु’टपाट
यी ३ स’मस्या भएकाहरुले भुलेरपनि नखानुहोस् ओखर, क्या’न्सर समेत हुन् सक्छ !